बलात्कार Archives - Page2of2- Lokpath Lokpath
२५ भाद्र २०७६, बुधबार ११:२२
काठमाडौं । बलात्कारको आरोपमा मङ्गलबार साँझ प्रहरीले एक इञ्जिनीयरलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मेलौली नगरपालिकाका इञ्जिनीयर २७ वर्षीय रोशन चन्द रहेका प्रहरी निरीक्षक किसन चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
बलात्कार मुद्दाका फरार अभियुक्त २ वर्ष पछि पक्राउ
जागिर लगाईदिन्छु भन्दै आधा दर्जन युवतीमाथि बलात्कार, रोजगारीडटकमको म्यानेजर हुँ भन्दै फोन गर्थे !
काठमाडौं । जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा युवतीहरुलाई यौन शोषण गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णा सवरण गाउँपालिका-२ सितापुर बस्ने २९ वर्षीय सन्ताेषकुमार यादव रहेका
काठमाडौं । आफ्नै श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । आफू बिरामी हुँदा श्रीमान्ले बलात्कार गरेको जाहेरीे श्रीमती सावित्री (नाम परिवर्तन) ले महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा
काठमाडौं । जिल्ला अदालत उदयपुरले छ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको कसुरमा एक जनालाई १६ वर्षको जेल सजायको फैसला सुनाएको छ । पीडित बालिकालाई पीडकबाट २५ हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि
प्रहरीले बयान लिइरहेकै बेला बलात्कार आरोपी फरार भएपछि…
काठमाडौं । प्रहरीले बयान लिइरहेकै बेला फरार भएका बलात्कार आरोपी पुनः पक्राउ परेका छन् । फरार भएका सिरहाका २० वर्षीय राममणि यादवलाई मंगलबार राति सिरहा सदरमुकामबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको
बलात्कारको आरोप मुक्त नेयमार
एजेन्सी । फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का ब्राजिलियन फरवार्ड नेयमार बलात्कारको आरोपबाट मुक्त भएका छन् । नेयमारमाथि लागेको बलात्कारको आरोप पुष्टि नभएपछि ब्राजिलका प्रहरीले अनुसन्धान नै बन्द गरेको
भारतीय किशोरीलाई बलात्कार गर्ने नेपाली युवक पक्राउ
काठमाडौं । झापामा भारतीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा दुई युवक पक्राउ परेका छन् । भारत घर भएकी १९ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा कन्काई नगरपालिका-४ त्रिबेणी टोल बस्ने २२
भारतमा ९ वर्षीया नेपाली बालिकाको बलात्कारपछि हत्या !
काठमाडौं । भारतको दिल्लीमा ९ वर्षीया नेपाली बालिकाको हत्या भएको छ । बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिएको छ । बाजुराकी ती बालिकाको बाबुआमाले होस्टेलमा काम गर्ने र सोही होस्टेलमा
नेपाल प्रहरीका असईद्वारा २० वर्षीय युवती बलात्कृत
काठमाडौं । रौतहटमा जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा प्रहरीका असई राजेन्द्र साह रहेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले